Steven Kane – Creator – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Last Ship (2018) Season5Complete Unicode The Last Ship ရဲ့ Final Season ကို ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ဒီ Season ၅ မှာတော့ နိုင်ငံရေးတွေ War တွေကို အဓိကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Virus ကင်းစင်သွားပေမဲ့ စစ်ပွဲတွေဆင်နွဲဖို့ ဖြစ်လာတဲ့ အခါ ဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်ကျမလဲ ? နေသန်ဂျိမ်းသင်္ဘောကြီးကတော့ ဒီတစ်ခါတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပီး အရင်လိုလူတွေအကုန်ရှင်သန်နိုင်ပါ့မလား ? အမေရိကန်အနေနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကနိုင်ငံတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ပီး အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုရယူသွားနိုင်မလား ? ကပ္ပတိန်တွန်ချန်ဒလာကတော့ ဘယ်လိုတွေပြန်လည်ပါဝင်လာမလဲဆိုတာအကောင်းဆုံးကြည့်ရမဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၁၀) ပါဝင်လို့ ဘာသာပြန်ပီးတာနဲ့ရသလောက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Pyae Sone Ynwa & Lucas Wang ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi The Last Ship ရဲ႕ Final Season ကို ေရာက္ရွိလို႔လာပါၿပီ။ ဒီ Season ၅ မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေတြ War ...
TMDb: 6.3/10 522 votes
The Last Ship (2018) Season5Complete
The Last Ship (2014) Season4Complete Unicode ဒီ Season မှာတော့ စိတ်ပျက်ပီး လေ့လာလွင့်နေတဲ့ ကပ္ပတိန်ချန်ဒလာတစ်ယောက် ဂရိမြို့တစ်မြို့မှာ မိသားစုနဲ့ နေထိုင်ရင်း ဒီမြို့က ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပတ်သက်မိရာကနေ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ကယ်ဖို့ဖြစ်လာပြန်ပါပြီ။ အရင် Season တွေမှာ Virus ပိုးက လူသားတွေကို ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ ဒီ Season မှာတော့ ကောက်ပဲသီးနှံတွေကို ပျက်စီးစေပီး တစ်ကမ္ဘာလုံး ငတ်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ လူတွေစားဖို့မရှိလို့ ဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့ အချိန် Virus ဒဏ်ကိုခံနိုင်တဲ့ မျိုးစေ့လေးတွေကို အသက်နဲ့ရင်းပီး လုကျရာကနေ နိုင်ငံစုံက ကိုယ့်လူမျိုးကိုသာ ဦးစားပေးဖို့ဖြစ်လာတဲ့ အခါ မဟာမိတ်တွေခိုင်မြဲပါ့မလားဆိုတာကို ဟိုအရင် Season တွေလို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်လာပါတော့တယ် Zawgyi ဒီ Season မွာေတာ့ စိတ္ပ်က္ပီး ေလ့လာလြင့္ေနတဲ့ ကပၸတိန္ခ်န္ဒလာတစ္ေယာက္ ဂရိၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ မိသားစုနဲ႔ ေနထိုင္ရင္း ဒီၿမိဳ႕က ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္မိရာကေန တစ္ကမာၻလုံးကို ကယ္ဖို႔ျဖစ္လာျပန္ပါၿပီ။ အရင္ ...
TMDb: 6.3/10 521 votes
The Last Ship (2014) Season4Complete
The Last Ship (2016) Season3Complete Unicode The Last Ship Season2အဆုံးမှာ ဒေါက်တာစကော့လုပ်ကြံခံလိုက်ရတာသိပီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီ Season မှာတော့ နိုင်ငံရေးတွေပါဝင်လာပါပြီ တရုတ် ဂျပန်အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ဖြေဆေးပေးရာကနေ ပင်လယ်ဓါးပြတွေရဲ့ နှောက်ယှက်မူ့ တရုတ်ရဲ့လက်ဝါးကြီးအုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေအပြင် Virus ရဲ့ ပြောင်းလဲလာမူ့တွေကြောင့် ဖြေဆေးကအလုပ်မလုပ်တာတွေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Season လဲ အရင် Season တွေလိုပဲ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ မင်းသမီးအသစ်လေးကလဲလှတယ်။ ဒေါက်တာစကော့ကတော့ Season2မှာကိစ္စပျက်သွားတယ်ဆိုတာ Spoiler လိုက်ပါတယ်။ The Last Ship ပရိတ်သတ်တွေအကြိုက်တွေ့အုံးမဲ့ Season လေးပါ Zawgyi The Last Ship Season2အဆုံးမွာ ေဒါက္တာစေကာ့လုပ္ႀကံခံလိုက္ရတာသိပီးျဖစ္မွာပါ။ ဒီ Season မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေတြပါဝင္လာပါၿပီ တ႐ုတ္ ဂ်ပန္အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို ေျဖေဆးေပးရာကေန ပင္လယ္ဓါးျပေတြရဲ႕ ေႏွာက္ယွက္မူ႔ တ႐ုတ္ရဲ႕လက္ဝါးႀကီးအုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားတာေတြအျပင္ Virus ...
TMDb: 6.3/10 518 votes
The Last Ship (2016) Season3Complete
The Last Ship (2014) Season2Complete Unicode The Last Ship ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲဟာဆိုရင် Wliiiam Brinkley 1988 ခုနှစ်မှာရေးသားခဲ့တဲ့ The Last Ship ဝတ္ထုကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ. သည်းထိတ်ရင်ဖိုလျှို.ဝှက်ဆန်းကျယ်အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပါ.။ သည်းထိတ်ရင်ဖို လျှိ့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရဲ့ သဘောတရားအရ ကြည့်ရှု့သူကို အသည်းတလှပ်လှပ်ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ထိုင်ရာမထတမ်းကြည့်ရှု့နိုင်စေမယ့် ဆွဲဆောင်မှု့မျိုးကို အပြည့်အဝရရှိစေတယ်ဆိုတဲ့ ဖန်တီးမှု့မျိုးနဲ့ The Last Ship စီးရီးကို ဖန်တီးပုံဖော်ထားတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်.။ သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ မြန်မာ ပရိတ်သတ်နဲ့မစိမ်းလှတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး Eric Dane (Underworld, Spartacus,Doomsday)တို.မှမင်းသမီးချော Rhona Mitra တို.က အဓိကဇာတ်ဆောင်များအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်.။ အမေရိကန်သမ္မတရဲ.လျို.ဝှက်စေခိုင်းမှုအရ ကပ္ပတိန် Chandler ဦးစီးတဲ.သဘောၤသား ၂၁၇ယောက်ပါဝင်သော အမေရိကန်စစ်သဘောၤNatha James ဟာသိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာ Rachel နှင်.အတူအာတိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာ လူသားမျိုးနွယ်စုကို အမြစ်ပြတ်ခြေမှုန်းနိုင်လောက်အောင် ဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါပိုးတစ်ခုရဲ့ အရင်းအမြစ် တစ်ခုကိုသွားရောက်ရှာဖွေနေတဲ.အချိန်မှာပဲကမ္ဘာကြီးရဲ.၈၀ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးသွားခဲ.ရပါပြီ.. ။ အစိုးရအဖွဲ.အစည်းနဲ.လည်းအဆက်အသွယ်မရအခြားနိုင်ငံမှရန်သူတွေရဲ.တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတာကနေဘယ်လိုရုန်းထွက်ကြပြီး လူ့လောကကြီးကို ပြန်လည်ကယ်တင်ဖို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော ...
TMDb: 6.3/10 513 votes
The Last Ship (2014) Season2Complete